सेतो दुबी यसरी हटाउन सकिन्छ - NayaNepal News
Home स्वास्थ्य सेतो दुबी यसरी हटाउन सकिन्छ
स्वास्थ्य । मानिसमा हेर्दा आकर्षक र सुन्दर देखिने चाहना सबैलाई हुन्छ । तर छालामा देखिने विभिन्न समस्याहरुले मानिसको सुन्दरतालाई विगार्छ । छालामा देखिने विभिन्न रोगहरुमध्ये सेतो दुबी पनि एक हो । नेपालको जनसंख्याको करीब १० प्रतिशत मानिसमा सेतो दुबीको समस्या रहेको छ । धुलीखेल अस्पतालका छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्णका अनुसार सेतो दबी फैलीने र नफैलीने गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । फैलने सेतो दुबी शरीरको कुनै भागबाट शुरु भई विस्तारै शरीरभरी नै फैलन्छ भने, नफैलीने सेतो दुबी शरीरको कुनै भागमा मात्रै हुने गर्छ ।
शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएमा शरीरमा सेतो दाग आउने गर्छ । कसैमा वंशाणुगत गुणका कारण सेतो दुबी आउने गर्छ भने बढी डर, तनावमा रहने मानिसमा सेतो दुबी आउने डा। कर्णको भनाइ छ । तर सेतो दुबी कुनै रोग भने होइन । मानिसहरुमा सुन्दरतामा कमी महसुस गरी सतोदुबीको उपचार गर्ने गर्छन् । ‘सेतो दुबीले शरीरमा कुनै असर गर्दैन, यसको उपचार गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन’ डा। कर्ण भन्छन्, ‘तर शरीरमा आउने दागकै कारण हिनताबोध महसुस हुन्छ र आत्मश्विासमा कमी आउँछ भने दाग हटाउन समयमा नै उपचार गर्नुपर्छ ।’
डा. कर्णका अनुसार सेतो दुबीको उपचार तीन किसिमले गरिन्छ । औषधि सेवन, फोटो थेरापी र अप्रेसनबाट सेतो दुवीको उपचार हुने गरेको डा। कर्णले जानकारी दिए ।
फोटो थेरापी भनेको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट प्रकाशको किरणद्धारा उपचार गर्ने विधि हो । फोटो थेरापीमा कृत्रिम सुर्यको किरण वैज्ञानिक तरिकाबाट उत्पन्न गराइ सेतो दाग भएकाहरुको शरीरमा प्रयोग गरिन्छ । फोटो थेरापीले छालाको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई नियन्त्रण गरी शरीरको दाग मेटाउन सहयोग पुर्या‍उछ । फोटो थेरापी गराउँदा शुरुमा हप्तामा ३ पटक देखि क्रमश दुई पटक गरिन्छ । दाग हराउँदै गएपछि हप्तामा एक पटक मात्रै प्रयोग गरिने र निकोे भएपछि गर्नु पर्दैन ।
सेतो दुबीको उपचार औषधि सेवनबाट नभएमा फोटो थेरापीको माध्यमबाट उपचार गरिन्छ । औषधि सेवन र फोटो थेरापीबाट सेतो दुबी निको नभए शल्यक्रिया गरेर पनि सेतो दुबीको उपचार गरिन्छ । –खबरहबबाट साभार
Previous articleगोली हानेर एक युवकको हत्या
Next articleसी स्वागतको लागि सजावटमा मात्रै २० करोड खर्च
हस्तमैथुनबाट हुन्छ स्वास्थ्यमा फाइदै फाइदा